Sahitya – Page4– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
ललितपुर । करुणामय देवता रातो मछिन्द्रनाथ रथयात्रा आजबाट सुरु हुँदैछ । दिउँसो ४ बजेबाट सुरुहुने रथयात्रा पुल्चोकबाट गाहाबहालसम्म तानेर पुर्याइने छ । दोस्रो दिन गाहाबहालबाट सुनधारा पुर्याइन्छ भने तेस्रो दिन सुन्धाराबाट लगानखेल तानेर पुर्याइन्छ । चौथो दिन लगनखेलमा साइत जुराएर लगनखेलकै इटी भन्ने ठाउँमा राखिन्छ । केही दिन त्यहाँ राखेर साइत जुराएर रथ तानी जाउला […]
Posted in: Jiwan saili, mainNews, National News, Rochak, Sahitya, Technology
इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानद्वारा चारजना साहित्यकलाका प्रतिभाहरु पुरस्किृत हुँदै
काठमाडौं नगरपालिका घट्टेकुलोस्थित इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले यस वर्षको इच्छुक स्मृति पुरस्कार चितवन निवासी साहित्यकार ईश्वरी ओझा र काभ्रेपलाञ्चोक निवासी साहित्यकार प्रभात सापकोटालाई संयुक्त रूपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मित्रलाल पंज्ञानीद्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रेसित विज्ञप्तिमा उक्त कुरा जनाइएको हो । प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने साहित्यकार सहिद कृष्णसेन इच्छुकको नाममा […]
आस्था र विश्वासका सतीसाल क. कुमार
क्रान्तिको सपना बाँडेर त्याग र बलिदानको भीषण आँधीमय यात्राबाट आदर्शीकरण गरिएका क्रान्तिकानायक नै आज खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्दैछन् । खलनायक आफू उभिएको बलिदानको जगको समेत धज्जी उडाउदै आफ्ना सहकर्मीको हत्या गर्ने र बेपत्ता पार्ने अपराधीलाई छाँद हाल्नपुगेका छन्, आज । राजु बस्नेतको बढुवा गरेर क्रान्तिको सपनाको हत्या गरिरहेका छन् । आफ्नै आँखा अगाडिका यी कुरूप […]
‘हिमाली दर्शन’ उत्कृष्ट सिर्जना, सर्जक मोहन वैद्य‘किरण’ पुरस्कृत
दाङ । राप्ती साहित्य परिषद्ले मोहन वैद्य‘किरण’द्वारा लिखित हिमाली दर्शनलाई उत्कृष्ट सिर्जनाको रूपमा छनौट गर्दै “राप्ती सिर्जना पुरस्कार २०७५“ बाट मोहन वैद्य किरण र दिलसरी दल पुरस्कारबाट हिरामणि दुःखीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव समेत रहेका किरण र केन्द्रीय सदस्य दुःखीलाई पुरस्कृत गरेको हो । परिषद्ले राप्ती […]
Posted in: २०७४–चुनाव, National News, Politics, Sahitya
चितवन जिल्ला पार्टीले शहीद स्मृति ग्रन्थ निकाल्ने निर्णय गरेर मलाई मित्रमणि आचार्य बारे लेख्ने जिम्मा दिएको छ, खुसी लाग्यो । मित्रमणि शहीद भएको ३५ वर्ष हुनै लाग्दा पनि उहाँ चितवनको मात्र नभएर देशकै अजर अमर शहीदको कोटीमा पर्नेमा एक हुनुहुन्छ । राणा शासनदेखि ०४२ सम्मको अवधिमा देशमा शहीद हुनेहरू एक सतकभित्रै पर्ने हुँदा मित्रमणि उच्चकोटीका […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Jiwan saili, mainNews, National News, Sahitya
नेपालमा पुँजीवादको विकास भा’ छ । किन भा’छैन ? एकदम जब्बर रूपले पुँजीवादको विकास भा’छ । केही केही मनुवाले नेपालमा पुँजीवादको विकास भा’छैन भनेर भन्चन् । त्यो विल्कुल वाइह्यात कुरो हो । एकथरी कम्निसहर्ले पुँजीवादको विकास भा’छैन, सामन्तवादका हाडखोर अझै ज्युँदै छन् भनेर करान्ती गर्न पर्च भनेर लागेकै छन् । करान्ती पूरा भा’छैन भन्चन् । […]
Posted in: २०७४–चुनाव, National News, Politics, Sahitya, Tippani Bislesion
मूर्दा घाटको यात्री
स्वाभिमानको मेरो यात्रामा बाध्यताको काँढेतार लगाउने धृष्टता नगर मेरो नवीन विहानीप्रतिको अगाध आस्थामाथि धेरै गद्दारी र दलालीका फलामे साङ्गलाहरु नफाल मेरो महासागर तर्ने अनगिन्ति सपनाहरुमाथि धेरै जाल र बल्छीहरु नफाल एकदिन तिमीले फालेको बल्छीमा परेर तिमी आफै न्यायको कठघरामा फलामे साङलाले बाँधिने छौ अनि त्यस बखत, तिमीले बिछ्याएका काँढे तार र खडा गरेका पर्खालहरु बन्ने […]
भर्खरै प्रलेसको एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । सो सङ्गठनबाट प्रगतिवादी धाराको मुख्य हिस्सा र सो सम्वद्ध केही स्वतन्त्र लेखकहरूको एउटा हिस्सा अलग्गिएको छ । अहिले उक्त प्रलेसमा सरकारी कम्युनिस्ट पार्टी सम्वद्ध केही लेखक साहित्यकार, केही सङ्गठनात्मक कार्यकर्ता (अलेखक)हरू र सरकारी पक्षको पेरिफेरिमा फन्को मारेको कम्युनिस्ट घटकको मात्र संलग्नता छ । यसरी हेर्दा सारतत्वमा पहिले […]